साथीहरूसँग घडी 14
के कसैलाई थाहा छ केन्द्र कहाँ छ जहाँ हाम्रो सूर्य र यसको ग्रहहरू घुम्ती रहेको देखिन्छ? मैले पढेको छु कि यो अल्सिओन वा सिरियस हुन सक्छ।
टोटोमा ब्रह्माण्डको बीचमा कुन तारा हो भन्ने कुरा खगोलविद्हरूले अझै पक्का गरिसकेका छैनन्। ती तारा मध्ये प्रत्येक केन्द्र मा लाग्यो पछि अनुसन्धान आफैं चलिरहेको पाए। जबसम्म खगोलविद्हरूले केवल खगोल विज्ञानको भौतिक पक्षमा समात्छन्, तिनीहरूले केन्द्र पत्ता लगाउन सक्दैनन्। तथ्य कुरा के हो भने, ती ताराहरूमध्ये कुनै पनि ब्रह्माण्डको केन्द्र हो। ब्रह्माण्डको केन्द्र अदृश्य छ र टेलिस्कोपले पत्ता लगाउँदैन। जुन ब्रह्माण्डमा देखिने छ त्यो वास्तविक ब्रह्माण्डको सानो अंश मात्र हो, त्यस्तै अर्थमा जुन मानव, उसको शारीरिक शरीरले देखेको छ त्यो वास्तविक व्यक्तिको सानो भाग हो। भौतिक शरीर, मानिस वा ब्रह्माण्डको, एक रचनात्मक सिद्धान्त छ जुन देख्न सक्ने भौतिक कणहरूलाई सँगै समाहित गर्दछ। यस रचनात्मक सिद्धान्त मार्फत त्यहाँ अर्को सिद्धान्त संचालित हुन्छ, जीवनको सिद्धान्त। जीवनको सिद्धान्त शारीरिक र रचनात्मक सिद्धान्तहरू भन्दा पर विस्तार गर्दछ र भौतिक शरीरको सबै कणहरू र सबै शरीरहरूलाई चालमा अन्तरिक्षमा राख्छ। जीवनको सिद्धान्त आफैमा एउटा ठूलो सिद्धान्तमा समावेश छ जुन मानव दिमागमा अन्तरिक्ष जत्तिकै असीम छ। यो सिद्धान्तलाई धर्म र धर्मशास्त्रका लेखकहरूले ग्रहण गरेका छन्। यो युनिभर्सल माइन्ड हो, जिसमें सबै कुरा प्रकट, देखिने वा अदृश्य समावेश हुन्छ। यो बौद्धिक र सबै शक्तिशाली छ, तर समान अर्थमा कुनै भाग छैन अन्तरिक्ष को कुनै भाग छैन। यस भित्र भौतिक ब्रह्माण्ड सम्पूर्ण रूपमा र सबै चीजहरू जीवित छन् र सार्दछन् र तिनीहरूको अस्तित्व रहेको छ। यो ब्रह्माण्डको केन्द्र हो। "केन्द्र जताततै छ र परिधि कतै छैन।"
कुन कुराले मानिसको हृदयलाई हराउँछ? के यो सूर्य बाट लहरहरु को कम्पन, साँस को बारे मा के छ?
सूर्यबाट कम्पनले हृदयलाई हराउँदैन, यद्यपि सूर्यको रगतको परिभ्रमण र पृथ्वीमा सबै जीवनको साथ गर्नुपर्दछ। मुटुको धडकनको एउटा कारण रगतमा सास फेर्नु हो किनभने यो फोक्सोको हावा-कक्षहरू पल्मोनरी अल्वेओलीमा सम्पर्क राखिएको छ। यो शारीरिक रगतमा शारीरिक सास क्रिया हो, केन्द्रीय स्टेशन जसको हृदय हो। तर शारीरिक सास क्रिया हृदयको धडकनको वास्तविक कारण होइन। प्राथमिक कारण एक मानसिक इकाईको शरीरमा उपस्थिति हो जुन जन्ममा शरीरमा प्रवेश गर्दछ र शरीरको जीवनको अवधिमा रहन्छ। यो मानसिक अस्तित्व अर्कोसँग सम्बन्धित छ जुन शरीरमा हुँदैन, तर जो शरीरको वातावरणमा बस्दछ, वरिपरि छ र शरीरमा कार्य गर्दछ। यी दुई संस्थाहरूको कार्य र अन्तर्क्रियाबाट, सास र सास फेर्न जीवनभर जारी रहन्छ। शरीरमा मानसिक इकाई रगतमा बस्दछन् र यो सीधा रगतमा बस्ने यो मनोवैज्ञानिक इकाई मार्फत छ जुन मुटुले पिट्ने क्रममा छ।
"एउटाको मुटु" ठूलो विषय हो; "सास" एउटा ठूलो विषय हो; उनीहरूको बारेमा धेरै लेखिएको हुन सक्छ। कि हामी प्रश्नको अन्तिम भागलाई उत्तर दिन सक्षम हुन सक्छौं: "सास फेर्न के पनि" हामीलाई सूचित गर्नुपर्दछ "यसको बारेमा के।"
हृदय र यौन प्रकार्यहरू बीचको सम्बन्ध के हो - श्वास गर्ने पनि छ?
मानिसको हृदयलाई उचित रूपमा सम्पूर्ण शरीरमा विस्तार गर्न भन्न सकिन्छ। जहाँ जहाँ धमनी, शिरा वा केशिका हुन्छन्, त्यहाँ हृदयको अस्तित्व हुन्छ। रक्तसंचार प्रणाली रगतको लागि कार्य गर्ने क्षेत्र मात्र हो। शरीर र शरीर र शरीरबीच सञ्चारको लागि सासको माध्यम रगत हो। रगत तसर्थ, सास र यौन अंगहरूको बीचमा सन्देशवाहक हो। हामी फोक्सोमा सास फेर्छौं, फोक्सोले हावा रगतमा सार्छ, रगतको कार्यले सेक्सनको अंगहरूलाई जोड दिन्छ। मा The Zodiac, V. मा सम्पादकीय, जुन "शब्द," खण्डमा देखा पर्‍यो। 3, pp। 264-265, लेखकले लुशका गन्धको बारेमा बताउँछन्, इच्छाको विशेष अंग, यौन इच्छाको रूपमा। त्यहाँ यो भनिएको छ कि प्रत्येक सास फेर्दा रगत उत्तेजित हुन्छ र लुश्काको ग्रन्थिमा कार्य गर्दछ र यस अंगले या त बल मार्फत खेल्ने बललाई तल वा माथि जान अनुमति दिन्छ। यदि यो तलतिर जान्छ भने यो बाहिरको भागमा जान्छ, विपरीत अंगसँग संयोजनमा काम गर्छ जुन कन्या हो, तर यदि यो माथि जान्छ भने यो इच्छाशिला द्वारा गरिएको छ र यसको मार्ग मेरुदण्डको बाटोबाट हुन्छ। मुटु रगतको लागि केन्द्रीय स्टेशन हो, र यो स्वागत कक्ष पनि हो जहाँ शरीरमा प्रवेश गर्ने सबै विचारहरू दिमागले दर्शकहरूलाई प्राप्त गर्दछन्। यौन प्रकृति को विचार यौन अंगहरु को माध्यम बाट शरीर मा प्रवेश; तिनीहरू उठ्छन् र हृदयमा प्रवेशका लागि आवेदन दिन्छन्। यदि दिमागले उनीहरूलाई मुटुमा श्रोताहरू प्रदान गर्दछ र उनीहरूको मनोरन्जन गर्दछ भने रगतको सर्कुलेशन बढ्दछ र रगत सोच्न मिल्दो भागहरूमा जान्छ। बृद्धि भएको रक्तस्रावलाई छिटो सास फेर्न आवश्यक छ कि फोक्सोमा सास फेर्ने अक्सिजनले रगत शुद्ध पार्न सक्छ। यसको लागि रगत हृदयबाट धमनीहरूको माध्यमबाट शरीरको पछाडि जान्छ र शिरा मार्फत मुटुमा फर्कन्छ र यसको पूर्ण चक्र बनाएर करीव seconds० सेकेन्ड चाहिन्छ। मुटु छिटो पल्सेट हुनुपर्दछ र सास छोटो हुनुपर्दछ जब यौन विचारहरूको मनोरन्जन हुन्छन् र यौन अ the्ग हृदयबाट रगत द्वारा उत्प्रेरित हुन्छन्।
धेरै जैविक रोगहरू र स्नायु गुनासोहरू यौनजन्य विचारहरू मार्फत जीवन शक्तिको बेकार खर्चको कारणले हुन्छन्; वा, यदि कुनै खर्च छैन भने, प्रश्न जीवनमा भाग बाट फर्केर जीवन शक्ति को सम्पूर्ण स्नायु जीव मा पलटाव द्वारा र यौन अंगहरु बाट रगत को संचलन मा फिर्ता द्वारा। उत्पादक शक्ति तरलीफाइ गरीएको छ र रिवाउन्डद्वारा मारियो। मृत कोशिका रगतमा जान्छन् जसले उनीहरूलाई शरीर मार्फत वितरण गर्दछ। यसले रगत र शरीरका अ disease्गहरूलाई रोग फैलाउँछ। सासको गति दिमागको राज्यको सूचक हो र हृदयको भावनाहरूको दर्ता हो।
चाँदीले मानिस र पृथ्वीमा अन्य जीवनसँग के गर्नु पर्छ?
चन्द्रमाको पृथ्वी र पृथ्वीको सबै तरलहरूको लागि चुम्बकीय आकर्षण छ। आकर्षणको तीव्रता चन्द्रमाको चरण, पृथ्वीमा यसको स्थिति, र वर्षको मौसममा निर्भर गर्दछ। यसको आकर्षण भूमध्यरेखामा सब भन्दा बलियो छ र पोलमा सबैभन्दा कमजोर छ। चन्द्रको प्रभावले सबै बिरुवाहरूमा सारको उदय र गिरावट नियन्त्रण गर्दछ र प्राय: बोटबिरुवामा औषधीय गुणहरूको शक्ति र दक्षता निर्धारित गर्दछ।
चन्द्रमाले जनावर र मानिसमा भएका दिमाग र मानिसमा भएका दिमागलाई असर गर्दछ। चन्द्रमाको मानिससंगको सम्बन्धमा राम्रो पक्ष र दुष्कर्म रहेको छ। सामान्यतया नराम्रो पक्ष बोल्ने चन्द्रमाको बिस्तारै अवधिमा यसको संकेत गर्दछ; राम्रो पक्ष पूर्णिमामा नयाँको समयदेखि चन्द्रमासँग जोडिएको छ। यो सामान्य अनुप्रयोग व्यक्तिगत केस द्वारा परिमार्जन गरिएको छ; किनभने यो उसको मनोवैज्ञानिक र शारीरिक श्रृंगारमा मानवको खास सम्बन्धमा चन्द्रमाले कुन हदसम्म प्रभाव पार्न सक्छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ। सबै प्रभावहरू, तथापि, इच्छा, तर्क र सोच द्वारा प्रतिरोध गर्न सकिन्छ।
के सूर्य वा चाँद को विनियमित या कैथेमियल अवधि को नियंत्रित गर्दछ? यदि छैन भने के गर्छ?
सूर्य पिरियड तोड्दैन; यो सामान्य ज्ञानको कुरा हो कि मासिक धर्मको अवधि चाँहिको केही चरणहरूको साथ संयोग हुन्छ। प्रत्येक महिला आफ्नो शारीरिक र मनोवैज्ञानिक श्रृंगारमा चन्द्रमासँग सम्बन्धित छ; चन्द्र प्रभाव उड्डयन कारण यो चन्द्र को उही चरण सबै महिलाहरु मा अवधि को बारे मा ल्याउन छैन निम्नानुसार।
चन्द्रमाले उत्पादक कीटाणुलाई परिपक्व हुन र अंडाशय छोड्छ। चन्द्रमाले पनि भालेमा त्यस्तै प्रभाव पार्छ। चन्द्रले गर्भधारणलाई प्रभाव पार्छ र निश्चित समयमा यो असम्भव बनाउँछ, र गर्भधारण अवधि र जन्मको क्षण निर्धारण गर्दछ। यी अवधिहरूलाई नियमित गर्नमा चन्द्र मुख्य कारक हो, र चन्द्रमा पनि भ्रुणको विकासमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक हो किनभने आमा र भ्रुणको सूक्ष्म शरीर प्रत्येक चन्द्रमासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। सूर्यले पनि पुस्ताको काममा प्रभाव पार्छ; यसको प्रभाव चन्द्रमा भन्दा फरक छ, जबकि चन्द्रमाले एक चुंबकीय गुण र प्रभाव दिँदछ सूक्ष्म शरीर र तरल पदार्थमा, सूर्य शरीरको विद्युत वा जीवन गुणहरू, र चरित्र, प्रकृति र शरीरको स्वभाव। सूर्य र चन्द्रले पुरुष र महिलालाई पनि असर गर्छ। सौर्य प्रभाव मानिसमा चन्द्र छ, महिलामा चन्द्र।